SingForYou.net - whitekisslay's Channel
whitekisslay 's Channel
Contest Winner let's sing together
Last Login: 08-29-2016 10:21
ＤＲＥＡＭ until your dreams come ｔｒｕｅ ★
...¸,¤°´'`°•.¸O¸.•°´'`°¤,¸....|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯•.•¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯| WELCOME TO MY PROFILE! ☜♡☞ (｡◕‿‿◕｡)☜♡☞ (◕‿ ◕)
nawsis on Apr 22, 2013
Nay kg lar sis yay
အ ၇မ်း ကောင်း၏
Phoehtaung on Jun 9, 2011
သီ ချင်; ဆို ကောင်; တဲ့ ည ငယ် လေ; ဖြူ ဖြူ ....ပေါ် မ လာ အတော် ကြာ ပြီ မို့ အိမ် တိုင် ရာ ရောက် လာ ပြီ; အာ; ပေ; သွါ; ပါ တယ် ဗျာ;........
blizelite on May 6, 2011
I just had to drop by and say Hi .:)
deyejiar on Apr 27, 2011
tznwe09 on Apr 14, 2011
ဆဖယမှာ စံထားးအားးကျရတဲံ အသံရှင်ဖြစ်တဲ့ ရဲ. ကမ္ဘာကိုလာလည်သွားးပါတယ်ရှင်...မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်ပါစစ်...။ ချမ်းမြေ့ပါစေနော်...။သီချင်းတွေလည်းနားးဆင်သွားးတယ်...အမြဲအားးပေးးနေတာပါနော်...ကဲ...ရောက်နေတာလည်းးကြာပြီ...ပြန်ဦးးးမယ်နော့.....။တာ့တာ.။
waiphyoaung on Apr 14, 2011
ကျွန်တော်တို့လိုမဟုတ်တစ်ရုတ်လောက်ပဲဆိုတတ်တဲ့ channelကိုအစ်မလိုအဆိုရောအသံရောအဖက်ဖက်ကပြောစရာ မရှိလောက်အောင်ကောင်းနေတဲ့သူတစ်ယောက်ကအလည်လာရောက်ကြည့်ရှု အားပေးသွားလို့ အရမ်းပျော်သွားပြီးအစ်မဆီကိုလည်း မဝံ့မရဲ့နဲ့ပဲ လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးလည်ပတ်သွားတယ်ဗျာ အစ်မလည်းပဲ နှစ်သစ်မှာပျော်ရွှင်မှုအပြည့်ကိုတစ်လုံးတစ်ခဲကြီးရရှိပါစေဗျာ...
maylay94 on Apr 14, 2011
လာလည်သွားတာ ကျေှးဇူးနော်~~စစ်အသံလေးကလည်း အရမ်းကိုကောင်းလွန်းလို့ စစ်သီချင်းတွေကို အာပေးသွားတယ်နော်~~နောက်လဲအမြဲအားပေးနေဦးမယ်နော်~~
taungportar on Apr 13, 2011
saungnge on Apr 1, 2011
ချစ်စရာကောင်းတဲ့အသံ ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီး အဆိုအ ရမ်းကောင်းတဲ့ စစ်ဆီကိုလာလည်သွားပါတယ်ရှင်.....အမြဲအားပေးနေပါတယ် ....=)
Mayy Khonn Athit
ဒီ သီချင်း လေး ကိဲု့ ချစ်သူငယ်ချင်း...
Views: 1497 Duration :04:01
Collar Paw Ka
Maw twer par p...Lipstick layy yayy....ahee:)))))) ...narr sinn arr payy kya tal chit maung na mha myarr arr lone ko de nay yar ka kyaezuu ahtoo tin par tal shin:)
Views: 1402 Duration :02:44
Views: 1335 Duration :03:01
MAW LITE TAR >>>Thu Yee sar yal:D:)))):ha...so ya te thu ka taw maww tar par palzzz..:D..sar tann tay ka lalayaynn ko myan tawtt mhar twer tal...aheee:))))))thee khan narr sin pay te chit bro&sis myarr Million thanz...
Views: 1260 Duration :03:01
Pyay Htwet Chin Khae Thu
Pyay Htwet Chin Khae Thu...te naw..:)
Views: 1258 Duration :03:37
2010 Thingyan mhar ygn ayann pyan chin nay tal Chit thungechin layy Ak ye request ya pyan so phit tar par.....Chit te thu ngechin layy myar ye arr payy listen mhu ko htawaya thanks par.........
Views: 1220 Duration :03:16
Honeymoon Kha Yee -2
"New test song lay par"....thee khan kya par shint:D....narr sin kyi par ohn>>>>>Arr lone thaw thu nge chin maung na mha myarr ko kyae zuu kyi g tin par tae:))))))))))))
Views: 1160 Duration :04:15
Min Tayout Thar
Views: 1080 Duration :03:57
Views: 1045 Duration :04:24
de thichin lay ko kyite lo par...:)
Views: 1034 Duration :03:26
De song layy ka 2nd time pyan so phit tar par...Huuuuu!!....a yann ko maw par tal...so tireddd>>>>>>i cantSING anymore:D:))))>>>but i luv the melody of this song>>>>thanxzz alotttt ALl of...
Views: 1032 Duration :04:02
Done Yane Nya
KAE....de thichin layy ne tutu lite pe dance kya ya aung nor...kayin lo taw nal nal layy ka tat tal:)(✖‿✖) ........lalala^o^......Amyae tan narr sinn arr payy kya te chit maung na mha myar arr lone...
Views: 1003 Duration :03:49
View All Recordings of whitekisslay